CNC machining Service, Steel Nkedo, Aluminium Nkedo - Grand
The ụlọ ọrụ nwere ebu imewe, na-anwụ mgbatị na CNC machining noo, ọkachamara na imewe, nhazi na mmepụta nke dị iche iche na metal na-abụghị ọkọlọtọ akụkụ na ọkọlọtọ akụkụ. The ngwaahịa na-aka dị iche iche na ubi ndị dị otú ahụ dị ka akpaaka akụkụ, ụgbọ mmiri, na ígwè, ọgwụgwọ, akụrụngwa support, ngwá ụlọ ngwa, ngwá ọrụ hardware, wdg, na-tumadi resịrị ndị United States, Japan, Italy, Canada, China na mba ndị ọzọ .
Mgbe fọrọ nke nta a afọ iri nke ìgwè, anyị nwere ọgaranya ahụmahụ ígwè n'ichepụta. Anyị bụ ezi na nēfe nonferrous ọla dị ka ọla kọpa, aluminum, na zinc alloys, na nwere ikike usoro nkenke ngwaahịa. N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ eguzobewo ogologo oge na ike ekwenye mmekọahụ ụfọdụ ferrous metal foundries na elu ọgwụgwọ osisi ndị dị otú ahụ dị ka plating na Anodizing, otú nwere ike inye onye-nkwụsị ọrụ maka ndị ahịa.
Okporo Ring Product Open Die Usoro Automatic H ...
High Quality ahaziri Mini Cardan aro custo ...
High Quality ahaziri Mini Cardan aro N'ihi A ...
OEM machining Aluminium Brass igwe anaghị agba nchara ge ...
Omenala Mere ọla kọpa mgbatị akụkụ na machining
Aluminum nut hexagonal waya eru machining a ...
© Copyright - 2010-2020 : All Rights Reserved. Apụta Products , Sitemap , Mobile Site
Pipe Dabara Adaba Union yiri okoso , Black achọkarị ịna Iron Pipe Dabara Adaba , TM Pipe Fittings , Ewepụghị Pipe Dabara Adaba , 4 Way Pipe Dabara Adaba , High Pressure Y Pipe Dabara Adaba ịkụ gọlfụ , All Products